Chii Chinonzi Kusiyana Pakati pe WordPress.com Uye WordPress.org? - Semalt Inopa Mhinduro
Kana uri kuronga kuumba webhusaiti, unofanirwa kusarudza jongwe WordPress kuti rive rakavakwa. Maererano nekufungidzira, WordPress ane simba pamusoro makumi matatu kubva muzana ye internet uye imwe yezvinyorwa zvakakurumbira. Inopa mifananidzo yakawanda, maitiro, zvisarudzo, uye zvinhu zvokusarudza kubva. Asi usati wasarudza WordPress, unofanira kunge uchiziva mutsauko wezwipress.com uye wordpress - comprar domain.org. Julia Vashneva, uyo Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, akacherechedza kuti kunyange zvazvo musiyano wacho muduku, iwe unofanira kuva nechinangwa chekusarudza uye kuti ungavaka sei nzvimbo nenzira iri nani.
WordPress ndiro zita risingadi sumo. Ichi chikamu chemashonga masimba akawanda emawebsite pane nhamba yakawanda yevashandi paIndaneti. Panzvimbo yekutsinhira zvakananga mafaira kumavhareji ekuumba mawebsite, unogona kushandisa WordPress pakusika mafaira backend uye kuaita akabudiswa nenzira iri nani. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuumba, kugadzirisa nekugadzira mapeji ose ewebhu uye kugadzira zvigadzirwa zvehutano, zvinyorwa zvebhurugi, uye kuisa zvakawanda zvemifananidzo. Wordpress ishoko rehuwandu hwehutungamiri hwehutano hwekutsvaga webhandu jargons. Izvi zvakasununguka zvinyorwa zvakapa vashandi varo mazamu ezvimwe sarudzo uye zvinhu zvinosarudzwa kubva. Icho chishandiso, chinonzi WordPress.org, ndechekuti iwe unokwanisa kukurumidza kubata makopi e software uye nebasa rawakange waita. Iko purogiramu yewe pachako, uye iwe hauna kupiwa zita rakarongedzwa rezita. Iwe unogona kuumba mawebsite akawanda epa platform ino sezvinobvira kunze kwekuda kwekuva nezita remudunhu uye imwe seva server. Wordpress.com, kune rumwe rutivi, rwakatangwa naMat Mullenweg uye ndiyo nzvimbo ye Automattic. Iko ndipo pane iwe unogona kuva nezita roga roga uye unogona kuvaka yako webhusaiti nenzira iri nani. WordPress.com inoshandiswa neunyanzvi, inoshandiswa nezvinhu zvakawanda..Iwe unogona kubudisa zvinyorwa uye kukurudzira nzvimbo yako kana iwe wakabhadhara mari yeimba uye webhupu yekuchengetedza kambani.
Vanhu vakasiyana-siyana vanotsvakurudza WordPress uye vanotarisa nzira dzekugadzirisa mawebsite asina ruzivo, uye izvi zvinobvira kana iwe une wordpress.org. Asi kana iwe uri kushandisa wordpress.com, iwe unofanirwa kubhadhara mari yose nekuda kwezita rezita rekugadzirisa uye kubata. Zvisinei, mamwe makambani anopa vashandisi vavo nechinzvimbo chekushanda subdomains kunyange kana vakashandisa wordpress.com.
WordPress.com inokwanisa kushanda pane imwe nzira yekubhadhara version uye ine zvakawanda zvezvinhu. Kana iwe uri kutarisa kuti uite webhusaiti yehutano, mari inowanikwa gore negore chimwe chinhu kubva pa $ 19 kusvika ku $ 25. Iwe unogona kuvandudza izwi rako repepress.org uye uwane tsika yakagadzirwa. Nhamba yakawanda yemaphaketuru inowanika, uye mitengo inowirirana kubva kune imwe kambani yekugadzirira kune imwe.
Kana wakanga uchishandisa webhusaiti yepaiti pazwipress.org, kune mikana yokuti iwe uchange uine ruzivo rwakakwana rwekugadzirisa uye zvidzidzo. Asi kana uri kushandisa webpark wordpress.com, iwe unogona kuwana zvakawanda zvezvigadziro uye zvinyorwa zvokusarudza kubva. Nzvimbo yako yepaIndaneti inogona kuvakwa yakawanda uye inoshamisa nezwipress.com, uye iwe unopiwa zvakawanda zvekugadzirisa zvinhu uyewo mazita ewebhu.
Kungofanana nemagadzirirwo uye zvinyorwa, unogona kuwana zvakawanda zvemashoko nema Plugins mu wordpress.org, nepo wordpress.com inopa zvakawanda zvakawanda uye mapurundi ari kupfuura zvamunotarisira.
Kana uchinge wasarudza kuvaka webhusaiti, danho rako rekupedzisira nderokutsvaga kambani yakatendwa yekugadzirisa uye kubhadhara kwewebsitepress.com website.